HAMBALYO: Kooxda Real Madrid oo ku guuleysatay horyaalka La Liga iyadoo kulammo kale harsan yihiin – Gool FM
HAMBALYO: Kooxda Real Madrid oo ku guuleysatay horyaalka La Liga iyadoo kulammo kale harsan yihiin
Dajiye April 30, 2022
(Madrid) 30 Abriil 2022. Real Madrid ayaa garoonkeeda Santiago Bernabéu guul kaga gaartay kooxda Espanyol, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-0, Los Blancos ayaa kaddib guushan ay gaartay loogu caleemo saaray ku guuleysiga koobka horyaalka Spain ee xilli ciyaareedkan 2021/2022, waana horyaalkeedii 35-aad ee La Liga.
Daqiiqadii 33-aad Real Madrid ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay Rodrygo kaddib markii uu ka caawiyay saaxiibkiis Marcelo.
43 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Real Madrid ayaa dhalisay goolkeeda labaad ee ciyaarta waxaana markale 2-0 ka dhigay da’ayarkeeda Rodrygo.
Marco Asensio oo caawin ka helay saaxiibkiis Eduardo Camavinga ayaa daqiiqadii 55-aad wuxuu hoggaanka u dheereeyay kooxdiisa Real Madrid wuxuu ciyaarta ka dhigay 3-0 ay ku hoggaamineysay Los Blancos.
Daqiiqadii 81-aad K. Benzema ayaa wuxuu dheesha ka dhigay 4-0 ay ku hoggaamineysay kooxda Real Madrid, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Vinícius Júnior.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 4-0 ay kaga adkaatay Real Madrid kooxda Espanyol oo marti ugu ahayd garoonka Santiago Bernabéu, kaddib guushan ay gaartay Los Blancos ayaa loo caleemo saaray koobka horyaalka Spain ee xilli ciyaareedkan 2021/2022.
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Leeds United iyo Manchester City ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Man City oo la wareegtay hoggaanka Premier League kaddib markii ay ka soo adkaatay Leeds United